Gaia-X yakasarudzika yeruzhinji gore chikuva kubva kuOVHcloud uye T-Maitiro akavakirwa paOverStack | Linux Vakapindwa muropa
Gaia X chirongwa chingori chakaziviswa mune iyo GDPR OVHcloud uye T-Systems vabvumirana kushandira pamwe. Uku kudyidzana kuchatungamira mukugadzirwa kweyakavimbika yeruzhinji gore rinopa kuGerman, France nemimwe misika yeEuropean, kuitira kuti igadzirise zvikamu zvese zvine chekuita nehutongi hwe data uye kutevedza kweGDPR.
Vaviri vanopa vane chikamu cheveruzhinji mupfungwa sevatengi, asiwo kune vashandisi vezvivakwa uye makambani ehukuru hwakasiyana.
Mamwe marongero pamusoro pekushandisa kwehunyanzvi atozivikanwa: Chipo chinofanirwa kunge chakavakirwa pamahara OpenStack mapurani uye shandisa maseva akatonhorera nemvura kubva kuOPV, vanofanirwa kupa kugona kwakanaka kwesimba.
T-Maitiro achabatsira pamwe nehurongwa hwenetwork uye masisitimu ehukama hweFrance akarongwawo kumhanyisa munzvimbo dzematare dzeTelekom kuGerman.
Iyo yeruzhinji gore chikuva, yakanangana neOpenStack, yakarongerwa kutanga kwa2021 uye izvi zvichaedza kuzadzikisa zvido zvevoruzhinji chikamu, OIV, pamwe nemakambani "eese saizi anoshanda munzvimbo dzakarongeka kana dzakaomarara dzinofarira veruzhinji".
Nechekudyidzana uku, OVHcloud uye T-Systems ichatora chikamu mukugadzira imwe yeruzhinji gore chikuva kunoenderana neOpenStack.
Iyi chikuva inobatsira kuEuropean Gaia-X chirongwa iyo inovimbisa akakwirisa emazinga ekuvhurika uye kujekesa, hutongi, kuvanzika uye kuchengetedzeka kweEuropean data.
"Deutsche Telekom mutsigiri akasimba wegore rakazvimirira reEuropean," akadaro Frank Strecker, mukuru wezveruzhinji hwevanhu kuDeutsche Telekom. "Zvisinei, kuitira kuti hutongi hweEuropean hutongi hwegore hubudirire, tinoda kukwira nekukurumidza. Uye kune izvo isu tinoda rutsigiro rweveruzhinji chikamu. «
Max Ahrens, CTO weT-Systems, inowedzera kuti:
"Saka neOPVcloud, tiri kuvandudza iyi yakazara yeEurope yakavimbika yeruzhinji kupa. Vedu vadyidzani veFrance vanounza yavo yenyika-ye-iyo-hunyanzvi Cloud Komputa tekinoroji, zvinoenderana nekugona kwavo kweye server yekugadzira cheni uye yakavhurika sosi yeruzivo system, isu tichitarisira zvigadzirwa uye mashandiro mune edu eGerman data nzvimbo. «
Muchokwadi, eiye chinangwa cheiyo Franco-chiGerman chirongwa ndechekugadza mitemo nemipimo zvakajairika pamakambani anogona kuvaka kuti vape kukosha kwavo chirevo.
Semuenzaniso, makambani akanyorwa anofanirwa kuzivisa panochengeterwa data uye panowanikwa nzvimbo dzedata, vachitsanangura kana vari pasi pemitemo yakadai seGeneral Data Protection Regulation (GDPR).
Gaia-X inotsvaga kuve imwe nzira kune vanopa rubatsiro veUS kupa huwandu hwekuwana mukana kune masangano eruzhinji uye makambani mushure mekuguma kweyekuchengetedza nhoo.
Nayo zvakanyanya France yakaita seGerman inoda kupokana nekutonga kwemahofori eAmerica Iine rimwe gore reEuropean, kuwedzera kune chimwe chinhu chiri matanho ayo hurumende yaTrump yatora kubva kuHuawei uye ikozvino Tiktok, semuenzaniso isu tine RISC-V Foundation nezviito zvayo kufambisa dzimbahwe rayo.
Iyi purojekiti inofunga sekongiri uye pamwe pamwe simba rekushandura zvishuwo zveGaia-X kuita zviito zvekongiri zvinobatsira musika weEuropean.
"Kubatana kwedu neT-Systems kunovakirwa, pakati pezvimwe zvinhu, pane zvakagovaniswa, senge kudzoserwa kwedata, kuchengetedzeka uye kujekesa, izvo zvakakosha kwatiri senhengo dzekutanga dzechirongwa cheGaia-X," anowedzera Falk Weinreich., Managing Director. yeCentral Europe yeOVHcloud. "Kwemakore anopfuura makumi maviri, isu takatsigira hunyanzvi mumusika wemakore, tichipa kugona kwakanyanya, hunyanzvi hwazvino uye pfungwa dzekutonhodza nharaunda. Takabatanidzwa neruzivo rweT-Systems, tinokwanisa kupa vatengi ruzivo rwakadzama mikana mitsva chose. ”
Iyi yeruzhinji gore chikuva ichave chinhu chakakosha icho chinobatsira kuwedzera iyo katarogu dzekushandisa kesi dzeGaia-X chirongwa. T-Maitiro uye OVHcloud, senhengo dzinovamba dzeGaia-X, ichagadzira ichi chitsva chipiro kuburikidza nekushandisa kwayo inotungamira masisitimu kubva mukugadzirwa kwayo: kuzere kuzere neRGPD nematanho akavhurika, asiwo kudzoserwa, kuvanzika kwedata uye epamusoro ekuchengetedza maitiro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Gaia-X yakasarudzika yeruzhinji gore chikuva kubva kuOVHcloud uye T-Maitiro akavakirwa paOverStack